स्वार्थ र सङ्कीर्णताको सतहभन्दा धेरै माथि उठेको हुन्छ– मितेरी साइनो । सतही र औपचारिक हँुदैन । आदर्श मित्रताको प्रतीक ‘मीत’ शब्द आफैँले पवित्रता, सौहाद्रता र हार्दिकताको विशेषता बोकेको छ । मीत नै हित भन्ने प्रचलित भनाइले नै मीतको खास सांस्कृतिक विम्ब बोकेको छ । नेपाली समाजमा मीतको सम्बन्धले केवल मित्रताको घनिष्टता मात्र प्रतिविम्बित गर्दैन । हाम्रो मौलिक तथा वैभवशाली संस्कृति र परम्पराको पनि पहिचान गराउँछ । मीत साथीहरूमध्ये सर्वाधिक घनिष्ट र निकटको साथी हो । मितेरी साइनो आलग अलग दुई आत्मा जोड्ने एक सुन्दर साँघु हो । जसले माया र विश्वासको मितेरी भावनाबाट निर्मित स्वास्थ सम्बन्धलाई आजीवन आवागमन गराइरहन्छ ।
मितेरी साइनोको चोखो मैत्रीपूर्ण गाँठो जीवन रहेसम्म मात्र बाँधिँदैन । मीतको मृत्युुपश्चात सन्ततिहरूलाई समेत पवित्र अनि घनिष्ट हाडनाताको मर्यादामा कसेर राख्छ । मितेरी साइनो हाडनाता रगतको नाताजत्तिकै बलियो र कसिलो हुन्छ । मीतका परिवार आफ्नै परिवारका सदस्यसरह आफूभन्दा ठूलालाई सम्मानस्वरूप ढोगभेट गरिन्छ भने सानालाई माया बाँडिन्छ । तर आफ्नै छोराभन्दा मीत छोराको स्थान र हैसियत माथिल्लो स्तरको हुन्छ । मीतको घरमा पुग्दा विशेष सम्मान पाइन्छ । हजुरकै घर हो जेजति मन लाग्छ आफैँ झिकेर भोगचलन गर्नुस् भनेर सम्पूर्ण अधिकार मीतलाई ससम्मान छोडिन्छ । मीत मात्र होइन, मीतको नाम लिएर अर्को मीत कहाँ पुग्ने जोकोही सम्मानका पात्र बन्छन् । परिस्थितिले बिछोडिन बाध्य सहृदयी मीतहरू पुनर्मिलन हुन उत्साहित हुन्छन् । आपसमा साटिदाको आस्वाद अविस्मरणीय हुन्छन् । एकले अर्कालाई लत्ताकपडा, फलफूललगायत खानेकुरा कोसेलीका रूपमा दिन्छन् ।
मीतको घनिष्टता कतिसम्म छ भने मीतसँगको झगडा कल्पनासम्म गरिँदैन । मीतको नाम काढेर बोलाइँदैन । बरु मितज्यूू भनेर सम्मानपूर्वक सम्बोधन गरिन्छ । सँगै सुत्दा भरसक आपसमा खुट्टा पनि ठोक्किनु र छोइनु हँुदैन भन्ने मान्यता छ । मीतको मन दुख्यो भने अशुभ हुन्छ भन्ने अवधारणा छ । नेपालको माटेभोट क्षेत्रमा त मीतको आगमनमा सबैभन्दा ठूलो सम्मान भनेको आफ्नी श्रीमतीलाई सेवामा पठाइदिने संस्कार हो । नेपाली उखान नै छ, सात गोत्र एक मित्र । अर्थात् सात पुस्ताको गोत्रीय नाताभन्दा एक पुस्ताको मितेरी नाता साइनो ठूलो हो भन्ने यसको आशय भएको कुरा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति तथा संस्कृतिविद् जगमान गुरुङ बताउनुहुन्छ । मीत लगाउने प्रचलन कहिलेबाट सुरु भयो भन्ने ठ्याक्कै मिति थाहा नभए पनि यजुर्वेदमा मित्रताको भावनाको कुरा उल्लेख गरिएको हुँदा मीतको प्रचलन वैदिक कालदेखि नै भएको ठम्याइ छ गुरुङको ।
मीत दुई प्रकारका छन् । आपसमा दुवैको हात एकपटक माथि एकपटक तल पर्ने गरी अँगालो मारेर लगाइने बाहाजोरी मीत र टीकाटालो नगरी केवल बोलीको भरमा लगाइने मौखिक मीत । बाहाजोरी मितेरी साइनोमा जुठोपिण्ड लाग्छ भने मुखको मीतमा लाग्दैन तर दुवै प्रकारका मितेरी साइनोमा हाम्रो सभ्यताको संस्कार र संस्कृति सजिएका छन् ।
मीत लगाउनका लागि धनीगरीब, शिक्षित अशिक्षित, कालोगोरो, सानोठूलो, जातपातको असमानताको तगारोले रोक्दैन । कहिल्यै छेक्दैन, नजिकटाढाको पर्खालले पनि । जोकोही जहाँकासँग मीत लगाए पनि आखिर मीत नै हुन्छ । विशुद्ध र सहृदयी सम्बन्ध मात्रको साइनोलाई नै आन्दोलित गर्छ ।
अन्तर्जातीय मीत लगाउनु मीतको अर्को विशेषता हो । यथार्थमा मीत लगाउनु भनेको सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय बढाउनु हो । जहाँ एकले अर्काको सांस्कृतिक त हुँदै हो । यसबाहेक समाज र सामाजिक मनोविज्ञान पनि बुझ्नु पनि हो । अर्को जातिको मौलिक पहिचानको पहिचान लिनु पनि हो । नेपालका प्रत्येक जातजातिले आ–आफ्नै जातीय मौलिकता र विशेषता बोकेका छन् । मीत दुई प्रकारका छन् । आपसमा दुवैको हात एकपटक माथि एकपटक तल पर्ने गरी अँगालो मारेर लगाइने बाहाजोरी मीत र टीकाटालो नगरी केवल बोलीको भरमा लगाइने मौखिक मीत । बाहाजोरी मितेरी साइनोमा जुठोपिण्ड लाग्छ भने मुखको मीतमा लाग्दैन तर दुवै प्रकारका मितेरी साइनोमा हाम्रो सभ्यताको संस्कार र संस्कृति सजिएका छन् ।
मीत लगाउने तरिका ठाउँ र परिवेशअनुसार फरक फरक पद्धति पाइएका छन् । समाजका केही मान्छेहरू वा अविभावकको उपस्थितिमा मीत लगाउँदा रहेछन् भने कोही मीतहरू मात्र मिलेर । कोही मठमन्दिरका देवीदेवतालाई साक्षी राखेर पूजाआजा गरेपछि मीत लगाउँदा रहेछन् । कोही घरमै बत्ती बालेर धूप, अक्षता फूलले पूजा गरेपछि आपसमा पैसा तथा ल्याइएका चिनोरूपी रुमाल, घडी, लुगाफाटोलगायतका सरसमान साटफेर गरेर । मीतको लगाउँदाको अन्तिम प्रक्रियामा टाउको एकआपसमा ठोक्काउने प्रचलन पनि छ केही ठाउँहरूमा । कसैले ज्योतिषीले दिएको निर्देशनानुसार मीत लगाउँथे । मीत लगाइयो भने व्यक्तिको अर्थ आर्जन, सन्तान यश वृद्धि, शत्रु नाश, दुर्घटनाबाट जोगिनेजस्ता सकारात्मकतामा विश्वासका साथ तोकिएको जाति वा व्यक्तिसँग परम्परागत विधि विधानानुसार मीत लगाउँथे । पुरानादिनहरूमा प्रायः समान रुचि, परिवेश, हैसियत र उमेरका आपसमा मिल्ने दौँतरीहरू बीच मीत लगाइन्थ्यो । कतिपय ठाउँमा आँखा जुधेकै भरमा मीत लगाइन्थ्यो । कुनै ठाउँमा नाम, अनुहार, जिउडाल, रूपरङ्ग उस्तै वा आंशिक मिलेका बालक तथा तन्नेरीहरूलाई कुनै स्थानीय बासिन्दाले ‘ल आजदेखि तिमीहरू मीत भयौ है’ भनेकै भरमा आपसी सम्बन्ध मौलाएर साँच्चिकै मीतमा रूपान्तरित पनि भइहाल्थ्यो । चाहे तिनीहरू अपरिचित नै किन नहुन् ।
मनाङको स्याफुङ मेलामा रुमाल, टोपी, गलबन्दीजस्ता लागाइएका लुगा फ्याँक्छन्; जसलाई स्थानीय लामाले एक अर्काको लुगा गाँसिदिन्छन् । सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचानपछि दुवैलाई लामाले खाँदा लगाइदिएर मितेरी साइनो गाँसिन्छ ।
जुन तरिका र पद्धतिबाट लगाइएको मीत भए पनि सबै मितेरी सम्बन्ध आजीवन सुमधुर कायम होस् भनी कामना गरिन्थ्यो । मन वचन दुवैले आगामी दिनहरूमा जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि सहयोगी बन्दै जाने आपसी प्रतिबद्धता र वाचाबन्धन गरिन्थ्यो । मितेरी साइनो मान्छेमा मात्र सीमित छैन । दुई देशका ठाउँबीचमा पनि विस्तार भएको छ । जापानको टोगा र मुस्ताङको टुकुचे गाउँ र पोखरा कोमागाने, काठमाडौँ मात्चुमोतो सहरबीचको भगिनी सम्बन्ध मितेरी साइनोले नै गाँसिदिएका सम्बन्धका स्वरूप हुन् । यी र यस्ता नेपालका गाउँसहरसँग अन्य मुलुक पनि जोडिएका उदाहरण पाइन्छन् । भगिनी, मैत्री, मितेरी, मित्रताजस्ता निकट सम्बन्धका शब्दहरू मीतबाट नै आएका हुन् ।
नेपाली सङ्गीत आकाशका दुई आइकन अथवा नक्षत्र नारायणगोपाल र गोपाल योन्जन हुन् मीतका उल्लेख्य उदाहरण । मितेरी साइनोको सौहाद्रतापूर्ण सम्बन्धपछि अनेकौँ उम्दा, मेलोडियस र सुमधुर कालजयी गीत सङ्गीत जन्मिएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । जसको उल्लेखबिना नेपाली आधुनिक गीतसङ्गीतको इतिहास अपूरा हुन्छ । जुन गीत सुनेर उनीहरूलाई नदेखेका नयाँ नयाँ पुस्ता पनि आनन्दित हुन्छन् । आज पनि ती सदाबहार गीतहरू कोठा र मनमा गुन्जिरहेकै हुन्छ ।
स्वस्थ मीतबीचको घनिष्टता, पवित्रता र आत्मीयता कतिसम्मको उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने कुरा द्वापर युगका भगवान् श्रीकृष्ण र सुदामाको आदर्श उदाहरणलाई हेरे पुग्छ । कहाँ द्वारिकाको भव्य राजसिंहासनमा ऐस आराममा जीवन बिताउनुभएको भगवान् श्रीकृष्ण । कहाँ कुटीको तन्नम गरिबीमा लपेटिएर जीवन गुजारेका झुत्रे ब्राह्मण । मितेरी साइनोमा सबै समान हुन्छन् । त्यसैले आकाश जमिनको यस्तो असमानतामा पनि दुवै एकअर्कामा निःस्वार्थ मित्रभावले समर्पित हुन सम्भव भयो । मितेरी साइनोकै आत्मीयताको डोरीले सुखदुःखमा अत्यधिक निकट बनायो ।
मीतको महìव र प्राथमिकताको कुरा हिन्दु धार्मिक ग्रन्थमा पनि उल्लेख गरिएको छ । श्री स्वस्थानी व्रत कथानुसार, पार्वतीको आज्ञा पाएका अश्वस्थामा ऋषि पातालमा प्रवेश गर्छन् । श्री स्वस्थानी व्रत गराई दुःखीलाई उद्धार गर्ने उद्देश्यका साथ । श्री स्वस्थानी व्रत कथाको १८औँ अध्यायमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ– श्री स्वस्थानी व्रत विधि (पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि महिना दिनसम्म) पूरा गरिसकेपछि पीडित ब्रतालुले सगुनसमेतको प्रसाद पतिलाई दिनु । पति नभए छोरालाई दिनु । छोरा नभए मीत छोरालाई दिनु । मीत छोरा पनि नभए जुन कामना आफूले व्रत बसेको हो सोही कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गामा बगाइदिनु ।
पोखराको गणेश टोलस्थित गणेश मन्दिर पनि मितेरी साइनोको एक उल्लेख्य इतिहास हो । वि.सं. १८४९ मा नेवार जातिका जितारामले गणेश मन्दिर बनाए । मित्रताको साक्षीका रूपमा रहेको मन्दिरको गजुरमा सुनको जलप लगाउने कर्म भने उनैका मनकारी मीत जमदार खागे गुरुङले गरे । जसका लागि कास्की मौजा लामिडाडाका गुरुङले आफ्नी श्रीमतीले कानमा लगाइरहेकी चेप्टे सुनसमेत मासेका थिए । यसले मीतमा हुने मनकारी र सहयोगी भावनाकै स्वभावलाई चरितार्थ गर्छ ।
बाइसे चौबीसे राज्य कालमा पनि राजाहरू मीत लगाएको इतिहास छ । कतिपय मितेरी साइनो आफ्नो फाइदामा बढी केन्द्रित किन नहोस् पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका एकीकरण गर्न मितेरी साइनोलाई प्रमुख रणनीतिक हतियार नै बनाएका थिए भन्दा अतियोशक्ति नहोला । भक्तपुरका राजा तथा मीत बुबा रणजीत मल्ल (नरभुपाल शाह र रणजित मल्ल) बीच मितेरी सम्बन्ध थियो । उपत्यकाका मल्ल राजाका हालचाल बुझ्ने हिसाबले । स्वयं पृथ्वीनारायण शाहले मीत बुबा रणजित मल्लको छोरा वीरनरसिंह मल्लसँग मीत लगाए । उनले कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लसँग पनि मितेरी साइनो गाँसेर परिस्थिति गतिलो बनाए । उनले वि सं. १८२५ मा कान्तिपुरका राजा तथा मितज्यू जयप्रकाश मल्ल र पाटनका राजा रणजित मल्लका राज्य कब्जा गरे भने वि.सं. १८२६ मा भक्तपुरका राजा तथा मीत बुबाको राज्य । मितेरी सम्बन्धकै बलबाट एकीकरण गर्न सजिलो मात्र होइन । सम्भव भएको कुरामा इतिहासकारहरूको एक मत छ ।
तीन दशकअगाडिसम्म पनि मेरो जन्म गाउँघर (भिमाद नगरपालिका) किहु, तनहुँतिर मीत लगाउने चलन निकै चल्तीमा थियो । यो फलनाको त्यो ढिस्कानको मीत भनेको सुन्न खुब पाइन्थ्यो । स्थानीयबीच मात्र कहाँ हो र ? मनाङमुस्ताङबाट हिउँदमा जिम्मु, बोझो, फिटकिरी, बिरेनुन, खयरलगायतका हिमाली खजना तथा जडीबुटी बोकेर झर्ने भोटेहरूसमेत मीतका पात्र बन्थे । मीत नलगाएका लागि पनि इष्ट भनेर सम्बोधन गर्थे गाउँबासीहरू ती बक्खु र दोचाधारी भोटेहरूलाई । धेरै पछि थाहा भयो, इष्ट भनेको इच्छा पूरा गरिदिने हितकारी मान्छेलाई भनिदो रहेछ ।
भिक्षा देऊ भनेर घरढोकामा जोगीले जस्तो माग्न आउनेलाई कोदोको पिठो र डमरु बजाएर चामल दिने प्रचलन थियो । मङ्सिर, पुस लागेपछि जाडो छल्न आउने र फागुन लागेपछि फर्कने गर्थे । स्कुल जाँदा बाटामुनिका बारीमा असरल्लै बसेर दाउराको आगोमा कोदोको ढिँडो ओडाली खाएको दृश्य उत्तिकै रमाइलो लाग्थ्यो । तर अहिले न ती भोटेहरू आउँछन् । न त गाउँघरमा मीत नै लगाउँछन् । लगाउनेहरूलाई चामलमा बियाँ खोजे जसरी खोज्नुपर्ने नाजुक अवस्था छ ।
समयको अन्तरालपछि हाम्रा पुर्खाले स्थापित गराइदिएका यो मीत लगाउने मौलिक संस्कार समाजबाट तीव्र गतिमा टाढिएर गएको छ, नेपालभर । कतिपय ठाउँमा त लोप नै भइसक्यो । पहिले मीत लगाउने प्रचलन बढी मौलाएको पहाडी भेगमा समेत अवस्था नाजुक छ अहिले । सामाजिक परिवेशमा आएको परिवर्तन, सहयोगी भावनामा आएको ह्रास, बढ्दो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण जस्ता मीत साइनोको दुरुपयोग जस्ता कारणले गर्दा यसरी टाढिनुरहराउनु भनेको राष्ट्रिय अस्मिताको मेरुदण्ड कमजोर बन्नु हो । अथवा राष्ट्र आफैँ आफ्नो प्रतिष्ठा र सौन्दर्य गुमाउनु हो । समाजका यस्ता मौलिक तथा मर्यादित प्रचलन अनन्तकालसम्म नेपाली माटोको मौलिक उपज बनेर बाँचिरहनुपर्छ ।
जुजुधौ व्यवसायीलाई माग धान्ने चटारो
मातृभाषा पत्रकारिता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
झण्डापार्क जोगाउन खुटी खोलामा तटबन्ध आवश्यक